China 4oz 120ml Amber Glass Boston Bottle miaraka amin'ny orinasa mpamatsy Sprayer sy mpamatsy | Hoyer
4oz 120ml Amber Glass Boston Bottle miaraka amin'ny Sprayer
Fampiasana be dia be: ity sombin-tsokosoko tsara tarehy ity dia safidy tsara ho an'ny lotion homena, menaka ilaina na menaka manitra, lotion-tarehy, rivotra freshener, volo ary fangaro hafa.
Weight: 108g / 0.23 pounds
Haavo: 112mm / 4.4 santimetatra
savaivony: 49mm / 1,9 santimetatra
Color: manga, mazava, amboary na sary hoso-doko amin'ny loko hafa azo ekena ihany koa
Fitaratra goavam-be miaraka amin'ny sprayer, refillable, ultraviolet, karazana screw.
Azonao atao ny mampiasa maimaim-poana ity tavoahangy ambo 4oz ity amin'ny toe-javatra rehetra, salama sy azo antoka izany. Ny fitaovana rehetra dia BPA maimaimpoana sy LEAD maimaimpoana, tsy misy zavatra simika manimba azy ireo. Ny mpanondrana fantsom-bidy tsara miaraka amin'ny fantsona dia sokajy sakafo, ampiana amin'ny sela plastika, azonao atao ny mikorisa rehefa tsy mampiasa ianao, izay ahafahana misoroka ny vovoka.
Ny tavoahangy amber koa dia manana tombony hafa dia ny ultraviolet, afaka miaro ny ranon-javatra amin'ny fanimbana ny masoandro izy ireo. Tsy mila manahy momba ny fotoana fitahirizana intsony ianao, afaka mampitombo ny fotoana fitehirizana izy ireo.
Azo averina: aorian'ny fampiasana ny ranony dia azonao atao ny mamerina mamorona ranon-javatra tianao manokana. Fa ho an'ny fofona manitra na menaka ilaina, tsara kokoa ny manadio ny fofona alohan'ny hanoloranao azy ireo ao anaty tavoahangy satria mety ho voatsindrona ny sprayer rehefa ela ny fampiasana azy.
Size Boky: 120 ml lanjany: 108 g Haavony: 112 mm Haavo: 49 mm Boky: 4oz lanja: 0,23 pounds Haavony: 4.4 santimetatra Diameter: 1,9 santimetatra
Color Amber ny fanaovana pirinty na loko hafa (mazava, maitso, manga) dia azo ekena ihany koa
Previous: Ny kalitao 30ml 1oz Amber tavoahangy feno menaka miaraka amin'ny Dropper
Manaraka: 16oz 500ml Amber Glass Boston Bottle miaraka amin'ny paompy mainty
menaka ilaina amin'ny menaka
tavoahangy tsy misy fotony
tavoahangy fitaratra ho an'ny menaka
16 oz 500 ml kobalt Blue Glass Boston Bottle wit ...
Kobalt manga 16 oz Boston boribory boribory sy borosy ...